Hafatra farany ho an’ny tanora
«Fa izaho dia efa hatolotra sahady ary efa mby akaiky ny andro fialako. Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homen'ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin 'izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa.» — 2 Tim. 4:6-8.
Tsy manantena ny hiaina maharitra intsony aho. Efa hifarana ny asako. Ambarao amin'ny tanorantsika fa iriko ny hampahery azy ireo amin'ny teniko, ny amin'ny fomba fiaina izay manintona indrindra ny anjelin'ny lanitra ary ny hanondrotra ho amin'ny ambony indrindra ny hery miasa mangina ananan'izy ireo amin'ny hafa.
Nisy fotoana, nandritra ny alina, dia nifantina sy nanilika ireo boky izay tsy mitondra soa ho an'ny tanora aho. Ilaintsika ny hifidy ho azy ireo, boky izay hampahery azy ho amin'ny fiainana tsotra sy mazava ary hitarika azy ho eo amin'ilay Teny mivelatra. Izany no naseho ahy tamin'ny lasa ary nihevitra aho ny hitondra izany eto anatrehanareo ka hitahiry tsara izany.
Tsy manana fahafahana hanolotra ho an'ny tanora ireo lahatsoratra tsy misy vidiny isika. Boky mitondra fitahiana ho an'ny saina sy ny fanahy no ilaina. Zara raha voadinika manokana ny amin'ireo; hany ka ilaina ny hanazarana ny vahoakantsika amin'ilay teny nolazaiko. Heveriko fa tsy manana fijoroana ho vavolombelona hafa intsony ho an'ny olontsika aho. Ireo vahoakantsika matotra ara-tsaina dia mahafantatra izay mahasoa ho fanandratana sy fampiorenana ny asa. Kanefa, amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra mitoetra ao am-pon'izy ireo, dia ilainy ny miditra lalindalina kokoa amin'ny fianarana izay rehetra mahakasika an'Andriamanitra. Maniry mafy aho ny hananan'ny tanorantsika kilasy fandinihana boky manokana sady mendrika; dia mba hahazo izany koa anie ny lehibe. Tsy maintsy hazonintsika eo amin'ireo zava-manintona ara-panahin'ny fahamarinana ny masontsika. Ilaintsika ny mihazona ny eritreritsika sy ny saintsika hisokatra mandrakariva ho an'ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra. Tonga i Satana rehefa varimbariana ny olona. Tsy tokony hionona fotsiny isika satria naseho ny hafatra fanairana, fa tsy maintsy maneho izany hatrany hatrany koa isika. - RH, 15 Aprily 1915.